Lama Du’uun Hamaa Dha! |
Home Afaan Oromoo Lama Du’uun Hamaa Dha!
Bara 1992 WBOn kuma digidamaa ol tahu akka kaampi galuu murtaa’e. Mootumman EPRDF malaamaltumman itti murteesse macaqi godhee fixe. Walii galtee ABO fi EPRDF jiddutti godhame irratti yaroo hundaa kan komatamu Obbo Leencoo Lataa, Itti Aanaa Dura Taa’aa ABO ti. Maaliif Duraa Taa’aa ABO kan ture Obbo Galaasaa Dhalboo akka hin komatamne ifa dha. 1) Obbo Leencoon baayyee nama qara fakkaatu akkamitti amma kana gowwomuu danda’a yaadni jedhu isa duraa taha. 2) Sana duras tahe booda Malasaa Zenaawii wajjin wal quunnamtii nagaa akka qabu isatu himata. Sanas tahe kana wal komachuun Uummata Ormoof dimma tokko hin baasu.
Waan taheef iyyuu Obbo Leencoos tahee nama biraa ilmaan Oromoo akka dhumaniif kaampii galshuuf walii galteen jedhee ammanu hin danda’u. Siyaasaa keessatti wal gowwomsuu fi wal ganuun ni jira. Yaadni irratti waliif galame hafee waan mormii isaa tahe yaroo hojiin mul’atu galgalaa ganama argaa jirra. Ammami iyyuu haa dagaman malee isaanis yaroo sana akkuma har’aa kana araara barbaadanii nagaa buusuuf Mootummaa EPRDF wajjin akka walii galan karaa koo mamii hin qabu.
Har’a immoo kan caalu utuu waraanni EPRDF golee Oromiyaa hunda irra qubatee, naannoon Moromiyaa hedduun Komandi postiin bulaa jiru WBO kootu kiyyoo seenii dhumii jedhanii waamuun baayyee na gadsiisa. Abbootiin Gadaa akkuma Abbootii ABO durii sana araara barbaadanii nagaa buusuuf akka tahe eenyu caalaa iyyuu nan hubadha. Utuu kan mika’u tahee yaadni isaanii eebisamaa dha. Araarri tahaa jiru kun OPD fi WBO jidduu utuu tahee xiqqoo ni fakkata. OPDn namoota Afaan Oromoo dubbatan kan dhalootaan Oromoo hin taanee fi warra Oromoo diiguun beekaman haa qabatu malee dhaaba oromoo ti. Warri Abbooti Gaddaa yoo waan biraa dadhaban abaaruu ni dana’u. Kanaafuu ABO fi ODP jiddutti araarri akka tahuuf gahaa qabu haa jennu.
Qabson Bilisummaa Oromoo Afaan, aadaa fi duudha, mirgaa fi qabeenya Uummata Oromoo kabachiisuuf kan godhamu dha. Haayuu Dureen ABO Dawudi Ibsaa waraana umurii isaa guutuu itti dhama’ee ijaare ulifinaa fi jaalla aadaa fi duudhaa Oromoof qabuuf jecha Abbootii Gadaa fi Uummata Oromoof dabarsee laate. Akeeknii fi kaayyoon Mootummaa Itoopiyaa immoo eenyummaa Uummata Oromoo balleessu dha. Aadaa fi duudha Oromoof safuu hin qaban. Keessattuu Mootummaan Dr. Abiyiin gaggeessamuu adda dureen waan Oromoon qabu balleessu irratti kan xiyyeefate tahuu raga heddutu jira.
Mootummaa EPRDF Abbootiin Gadaa akkam godhanii akka ajajan yoo dide maal gochuu akka danda’an anaaf nagalaa hin jiru. Dr. Abiyi Oromoof qabsawwun xiqqaachuu dha jedha. Kana malee yaroo duraaf Mootummaa Habashaa keessa nama Oromoo gandaa fi amanitin adda baasuuf akka ifatti dubbachaa fi hojjechaa jiru namni hunduu waan argaa jiru natti fakkaata. Haalli kun Oromiyaa duwwaaf utuu hin taane biyyitti Itoopiyaa inni jaalatuufuu akka balaa guddaa qabu hubachuu qaba.
Akkan aadaa Oromoo an keessatti guddaeetti namni mangudoo tahee araaraaf taa’u nama garee tokko hin tumsine (neutral) tahuu qaba. Maqaa mangudummaan Jawwar Mohammed fi Baqalaa Garbaa kan afarsaa jiran mangudummaa Abbootii Gadaa hin ilaalu. Jarri kun ijoollee keenya xobotii hoolaa faaskaaf akka qopheessaa jiran WBOn fi Uummati Oromoo hubatee ofi irraa ari’uu qaba. Warri kun lamaan ergamtoota Mootummaa akka tahan ifa jira. Ragaan guddaan Wallaga keeessa deemanii namoota haasofsiisan hundaa mana hidhaa naqsiisanii jiru. Kan WBO mana hidhaa galshuuf utuu hin taane ficcisiisuuf deemu. Jawwar Mohammad WBO balleessuuf ifatti nama olola ofaa ture manguddoo jedhanii dhiyeessuuf Abbootiin Gadaa itti qaana’uu qabu. Abbootiin Gadaa dogongora kana gochuu isaaniif Uummata Oromoo dhiifa gaafachuun barbaachisaa dha. Kun maal agarsiisa yoo jennee aadaa keenya ija keenya duratti akka cabaa jiru dha. Utuu kana agarruu Abbootiin Gadaa iyyuu dhiiba mootummaa jala hin jiran jechuun rakkisaa dha. Jawwar fedhii isaan manguddumaa kana keessaa of bahaasuu qaba.
Haalli isaan jarjartiin ofaa jiran bakkam iyyuu hin gahu. Akeekni isaan fiigaa jiraniifis hin milkaa’u. Waan hunduaa duraa haala nagaan itti argamuu danda’u mijjeessuuf Jawwaar fi Baqalaan manguddoo kana keessaa bahu qabu. Inni lammaffaa WBOn utuu miila isaa tokko hin sochoosiin RIB Oromiyaa keessa bahee kaampii isaatti deebi’uu qaba. Sana booda yoo nagaan jiraachuuf wabii gahaa argate WBOn hiree isaa murteefachuu danda’a. Amma sana garuu maqaa Abbootii Gadaan Jawwaarii fi Baqalaan WBO qamaaxura keessa galshanii fixuuf shira xaxxaa jiraniin gowwoomuu hin qabnu. WBOn akeekaa fi kaayyoo of kenneef qaba. Abbootiin Gadaas dhiibaa mootummaa jalaa bahanii haqaa fi dhugaaf dhaabbachuu qabu.
Bara kana WBOn yaroo lammaffaaf yoo dhume hojiin Abbootii Gadaa ni xuraa’a. Haalli kun lama du’uu nutti taha. Kana booda aadaa fi duudha qabna jedhanii ijoolleen keenyaa fi ijoolleen ijoollee isaanii akka hin qabsoofne seenaa dukkanaa dhiifneef dabaruu Waaqayoo nuu haa oolchu. Qabsoon Bilisummaa Oromoof godhamus as irratti akka hin rawwatne eegannaa guddaa gochuu qabna. Kaanfuu utuu badiin inni dhumaa uummata keenya irra hin gahiin warri Abbaa Gadaa dhugaaf dhaabbatan deemsa kana hubatanii WBO irraa harka isaanii kaasuu qabu. Bara Baraan ganamne dhumuun nu gaha.
Previous articleXalayaa banaa: Araara ABO fi ODP jidduutti taasifame laalchisee, gammachuu fi yaaddoo nutti dhagayamu ibsachuu
Next articlePoliticizing Eritrea peace perpetuates conflict cycle
Jabessa February 1, 2019 At 1:51 am
Yaa abbotti Gadaa, wan kana olliti sararamee kana sirriti chaqaassaa!!! Kana boodaa “UuTTUUN” hinjiruu.